Maxaa nagu soo kordhay – Biyacade
November 17, 2016 November 17, 2016 biyacade
Maxaa nagu soo kordhay
sida aan la wada soconno soomaaliya waxeey ku dhawaaqday in ay guul dareeysatay isna aamini weeyday dooneysana in ay kala jabto noqotana maamullo kala duwan oo danahooda u gaar ah.
sagaashameeyadii waxaa soomaaliya jahwareershay qabyaalad aan dhamaan laheyn waxaa jira dowlado gaaala ah oo aan laheyd bad iyo birri ku filan haba ugu horeeyso ITOOBIYA.
Maadaama soomaalidu yihiin dad aan la dhosneyn xagga diinta iyo maadiga waxaa ka faaiideystay dad fara badan haba ugu hpreeyeen caada qaatayaal shosheeye u adeegaya.
shalay iyo maanta waxaa u dhaxeeya laba farqi oo waaweey Tan koowaad wixii ku dhaafay oo aad ka sabarto iyo kanlabaad oo ah in aad ka faaiideysato waqt xaadirkaan wax yaabaha ku horyaal balse soomaalida oo ah dad wax ka fiiriya wax yaabaha tagay ayaa noqday kuwa aan isu sabrin.
Hawiye waxa uu doonayaa in uu dalka hogaamiyo maadaama uu yahay qofka loogu kalsooni badan tahay dalka iyo dadka waxeeyna sabab uga dhigeen ayagoon ka dhex muuqaan dowlada kale ka qoomiyad ahaan.
Hadii aan si kale u dhigo
Daarood waa qowmiyad soomaalida ka mid ah balse waxeey had iyo jeer la shaqeeyaa gumeeystaha iyo shosheeyaha sida itoobiya iyo kenya.
Daaroodku waxa uu doonayaa in uu dalka hogaamiyo maadaama ay jiraan soomaaliya ayaga ku heyb ah oo ku dhex muuqa dowlada kale waxeeyna isu arkaan dad ilbax ah wax qabad wanaagsan kana shaqeeyn kara horumar iyo cadaalad.
Waxaa jira beeelo aan muuqan ee soomaaliya qas ka wada ahna kuwa jaajuusin ah una shaqeeya itoobiya iyo kenya.
Hadaba maxaa soo kordhay.
Somaaliya waxaa ka jira maamuloo aan qibrad u laheyn qaabka ay isu maamulaan ama ay u hoostagaan dowlada federaalka ah ee soomaaliya halka dowlada federaalku aysan garaneyn habka ay u maamuli laheyn maamul gobaleedyada.
Maxaa xigi doona……
Previous Dal iyo dad is diiday